ဗြိတိသျှဘုရင်မကြီး အဲလိဇဘက်မှာ Facebook Account ရှိပါသလား
19 May 2017 . 5:27 PM
၁၉၂၆ခုနှစ် ဧပြီ ၂၁ရက်နေ့မှာ မွေးဖွားတဲ့ ဗြိတိသျှဘုရင်မကြီးအဲလိဇဘက် (Queen Elizabeth II) ဟာ အခုဆိုရင် (၉၁) နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၅၂ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ (၆) ရက်နေ့မှာ နန်းတက်ခဲ့တဲ့အတွက် အခုဆိုရင် နန်းသက်ဟာ (၆၅) နှစ်ကျော်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂလန်၊ ဝေးလ်၊ မြောက်အိုင်ယာလန်၊ စကော့တလန်၊ ကနေဒါ၊ သြစတေးလျနဲ့ နယူးဇီလန်နိုင်ငံတွေရဲ့ အထွတ်အမြတ်ထားရာ ဘုရင်မကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် အပြောအဆို၊ အနေအထိုင်ကအစ တော်ဝင်နန်းထိုက်ပါပေတယ်။ အဲလိဇဘက်ဟာ အဘွားကြီးဖြစ်ပေမယ့် နည်းပညာအကြောင်းကို နားမလည်ဘူးလို့ ထင်လိုက်ရင်တော့ မှားသွားပါလိမ့်မယ်။
iPad ကြိုက်တဲ့ ဘုရင်မကြီး
အဲလိဇဘက်ဟာ iPad တစ်လုံး၊ Laptop တစ်လုံးနဲ့ စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးရှိပါတယ်။ စမတ်ဖုန်းဟာ အိတ်ထဲထည့်လို့ရတဲ့အထိ သေးငယ်ပေါ့ပါးပြီး Hack လို့မရအောင် လုံခြုံမှုစနစ်မြှင့်တင်ထားပါတယ်။ ဘတ္ထရီ ရာခိုင်နှုန်း ၁ဝဝအထိ အချိန်တိုင်းပြည့်နေအောင် ကိုယ်ရေးအရာရှိဖြစ်သူ အမ်ဂီလာ ကယ်လီ (Angela Kelly) က အားသွင်းပေးထားရပါတယ်။
ဘုရင်မကြီး ဖုန်းအများဆုံးပြောဖြစ်တဲ့သူတွေက သမီးတော်မင်းသမီး အန်နီ (Prince Anne) နဲ့ အပြေးနည်းပြ ဂျွန်ဝါရန် (John Warren) တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ နည်းပညာပစ္စည်းတွေကို ဘယ်လိုသုံးရမှန်းနားမလည်တဲ့အခါ နည်းပညာကျွမ်းကျင်တဲ့ မြေးဖြစ်သူ မင်းသား ပီတာဖီးလစ် (Peter Phillips) နဲ့ မြေးမ မင်းသမီး ဇာရာ (Zara) တို့ကို မေးမြန်းလေ့ရှိပါတယ်။
နည်းပညာ လိုက်စားတဲ့ ဘုရင်မကြီး
ဘုရင်မကြီးဟာ Facebook Account ရှိပြီး Page တစ်ခုတောင် ကိုယ်တိုင်ထောင်ထားပါသေးတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ Messenger ကနေ စကားစမြည်ပြောလေ့ရှိတယ်လို့ တော်ဝင်မိသားစုရဲ့ဂျာနယ်လစ်သမား ဘရိုင်ယန် ဟိုရေး (Brian Hoey) ကဆိုပါတယ်။
နာမည်အပြည့်အစုံ “Elizabeth Windsor” ဆိုပြီး Facebook မှာရိုက်ရှာလိုက်တဲ့အခါ Account ၃ခု တွေ့ရပေမယ့် ဘုရင်မကြီးရဲ့ Facebook Account ဟာ ဘယ် Account ဖြစ်တယ်ဆိုတာရယ် Facebook Friend ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုတာကတော့ တော်ဝင်မိသားစုဝင်တွေကလွဲလို့ ဘယ်သူမှ မသိပါဘူး။ ကဲ . . . (၉၁) နှစ်တောင်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ဘုရင်မကြီးတောင် Facebook သုံးသေးတယ်ဆိုတော့ ကိုယ်တွေလို ဆယ်ကျော်သက်တွေ Facebook သုံးတာ မလွန်ပါဘူးနော်။
ဗွိတိသြှဘုရငျမကွီးအဲလိဇဘကျ Facebook သုံးလား
၁၉၂၆ခုနှဈ ဧပွီ ၂၁ရကျနမှေ့ာ မှေးဖှားတဲ့ ဗွိတိသြှဘုရငျမကွီးအဲလိဇဘကျ (Queen Elizabeth II) ဟာ အခုဆိုရငျ (၉၁) နှဈရှိပွီဖွဈပါတယျ။ ၁၉၅၂ခုနှဈ ဖဖေျောဝါရီ (၆) ရကျနမှေ့ာ နနျးတကျခဲ့တဲ့အတှကျ အခုဆိုရငျ နနျးသကျဟာ (၆၅) နှဈကြျောလာပွီဖွဈပါတယျ။ အင်ျဂလနျ၊ ဝေးလျ၊ မွောကျအိုငျယာလနျ၊ စကော့တလနျ၊ ကနဒေါ၊ သွစတေးလနြဲ့ နယူးဇီလနျနိုငျငံတှရေဲ့ အထှတျအမွတျထားရာ ဘုရငျမကွီးတဈယောကျဖွဈတဲ့အတှကျ အပွောအဆို၊ အနအေထိုငျကအစ တျောဝငျနနျးထိုကျပါပတေယျ။ အဲလိဇဘကျဟာ အဘှားကွီးဖွဈပမေယျ့ နညျးပညာအကွောငျးကို နားမလညျဘူးလို့ ထငျလိုကျရငျတော့ မှားသှားပါလိမျ့မယျ။
iPad ကွိုကျတဲ့ ဘုရငျမကွီး
အဲလိဇဘကျဟာ iPad တဈလုံး၊ Laptop တဈလုံးနဲ့ စမတျဖုနျးတဈလုံးရှိပါတယျ။ စမတျဖုနျးဟာ အိတျထဲထညျ့လို့ရတဲ့အထိ သေးငယျပေါ့ပါးပွီး Hack လို့မရအောငျ လုံခွုံမှုစနဈမွှငျ့တငျထားပါတယျ။ ဘတ်ထရီ ရာခိုငျနှုနျး ၁ဝဝအထိ အခြိနျတိုငျးပွညျ့နအေောငျ ကိုယျရေးအရာရှိဖွဈသူ အမျဂီလာ ကယျလီ (Angela Kelly) က အားသှငျးပေးထားရပါတယျ။
ဘုရငျမကွီး ဖုနျးအမြားဆုံးပွောဖွဈတဲ့သူတှကေ သမီးတျောမငျးသမီး အနျနီ (Prince Anne) နဲ့ အပွေးနညျးပွ ဂြှနျဝါရနျ (John Warren) တို့ပဲဖွဈပါတယျ။ နညျးပညာပစ်စညျးတှကေို ဘယျလိုသုံးရမှနျးနားမလညျတဲ့အခါ နညျးပညာကြှမျးကငျြတဲ့ မွေးဖွဈသူ မငျးသား ပီတာဖီးလဈ (Peter Phillips) နဲ့ မွေးမ မငျးသမီး ဇာရာ (Zara) တို့ကို မေးမွနျးလရှေိ့ပါတယျ။
နညျးပညာ လိုကျစားတဲ့ ဘုရငျမကွီး
ဘုရငျမကွီးဟာ Facebook Account ရှိပွီး Page တဈခုတောငျ ကိုယျတိုငျထောငျထားပါသေးတယျ။ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ Messenger ကနေ စကားစမွညျပွောလရှေိ့တယျလို့ တျောဝငျမိသားစုရဲ့ဂြာနယျလဈသမား ဘရိုငျယနျ ဟိုရေး (Brian Hoey) ကဆိုပါတယျ။
နာမညျအပွညျ့အစုံ “Elizabeth Windsor” ဆိုပွီး Facebook မှာရိုကျရှာလိုကျတဲ့အခါ Account ၃ခု တှရေ့ပမေယျ့ ဘုရငျမကွီးရဲ့ Facebook Account ဟာ ဘယျ Account ဖွဈတယျဆိုတာရယျ Facebook Friend ဘယျနှဈယောကျရှိတယျဆိုတာကတော့ တျောဝငျမိသားစုဝငျတှကေလှဲလို့ ဘယျသူမှ မသိပါဘူး။ ကဲ . . . (၉၁)နှဈတောငျရှိပွီဖွဈတဲ့ ဘုရငျမကွီးတောငျ Facebook သုံးသေးတယျဆိုတော့ ကိုယျတှလေို ဆယျကြျောသကျတှေ Facebook သုံးတာ မလှနျပါဘူးနျော။